Ubuninzi be-Inshurensi yokuzibandakanya ne-Apple Watch Grant ukuba abaThengi bakho benza uMthambo | Ndisuka mac
I-inshurensi yeVitality Ijoyina iGranti yokuBukela iApple ukuba abaThengi bakho bayazilolonga
Hambisa i I-Apple Watch ngexabiso lokomfuziselo iya kuba yifashoni phakathi kweenkampani zeinshurensi yobomi. I-inshurensi yokuqala, ubuncinci siyazi ukuba siyenzile le nto, ngu-American John Hancock. Njengoko besitshilo kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Uthotho lwe-Apple Watch 3 inokuba yeyakho ukuba uthatha umgaqo-nkqubo othile wobomi kwaye wenze isixa esithile somthambo ngenyanga. Kwimeko apho, uhlawula kuphela ixabiso lokuqala le- $ 25 kwaye unentlawulo yenyanga eyi- $ 0 / ngenyanga. Namhlanje sibonile isenzo esifanayo kwi-Inshurensi yeVitality, i-inshurensi yase-UK.
Kukunyusa ukuba inkampani iqale ukusukela namhlanje kude kube nguDisemba 31. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubhalise kwisicwangciso seVitalityHealth okanye seVitalityLife. Ungafumana unokufumana iApple Watch Series 3 I-38mm yasimahla okanye i-42mm ene-GPS ye- $ 59. Ukususela ekuthengeni, inkampani iya kufaka i-invoyisi imali yenyanga, ngokusekwe kumanqaku afunyenweyo. Abasebenzisi abafikelela kumanqaku ayi-160 abayi kuhlawula nantoni na ngenyanga, kodwa kufuneka bahlangabezane nale mfuneko kangangeenyanga ezingama-24.
Kodwa isithembiso asipheli apha. Unokukhetha imodeli yeNike + ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo. Kwelinye icala, ukuba ucinga uku-odola uthotho 3 nge-LTE, kuya kufuneka ulinde iiveki ezimbalwa ukuze ube nesitokhwe.
Abasebenzisi abaninzi bafuna ukuba ne-Apple Watch, kodwa abazi ukuba baya kuhlangabezana neemfuno zenkampani kunye neendandatho ze-Apple. Kungenxa yoko le nto inkampani yeinshurensi inika imizekelo:
Ukuthatha amanyathelo ayi-12.500 XNUMX ngosuku olunye kusizuzela amanqaku asibhozo
Ukuhamba ngebhayisikile, phakathi kwe-30-59 imizuzu yokuhamba ngebhayisikile ngamanqaku ama-5.
Kwimeko embi, abasebenzisi abangazilolongi kwaphela, baya kuhlawula umrhumo weepawundi eziyi-12,50 ngenyanga. Ubungqabavu buyavuma ukuba le nkqubo iyabanceda abathengi kunye neinshurensi uqoboAbathengi bathatha imveliso yommangalelwa kwaye i-inshurensi iya kubona ukwehla kwembuyekezo ngokusweleka kwabanini bayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-inshurensi yeVitality Ijoyina iGranti yokuBukela iApple ukuba abaThengi bakho bayazilolonga
UDaniel Sanchez Rasmussen sitsho
Eyokuqala yokwenza apha iphumelele
Phendula kuDaniel Sanchez Rasmussen
Yongeza umphumo wobunzulu kwiifoto zakho ngokuGxila kwiFoto